Waraanni Israa’el Masjiid Al-Aqsaa weeraruun Falasxiinota Salaata Jum’aa irra turan heddu kan hidhe tahuu gabaafame - NuuralHudaa
Waraanni Israa’el Masjiid Al-Aqsaa weeraruun Falasxiinota Salaata Jum’aa irra turan heddu kan hidhe tahuu gabaafame
Israa’eel fulaa dallaa Masjiid al-Aqsaa Baabul-Rahmaa jedhamu cufuu isii mormuun, Isniina dabre irraa eegalee lammiileen Falasxiin fulaa kana duratti salaataa kan jiran yoo tahu, mormiin kun Jum’aa har’aatis itti fufee jira. Kanuma hordofuun waraanni Israa’el muslimoota Salaata Jum’aa irra turan jidduu namoota 40 ol ukkaamsuun kan hidhe tahuu odeeyfannoon ni addeessa.
Poolisiin Israa’el Alhada dabre irraa eegalee daandii gara fulaa Baabul-rahmaa geessu cufuun, muslimoonni Falasxiin gara Al-Qudsi seenanii akka hin salaatne dhoorkaa ture. Lammiileen Falasxiin akka jedhanitti, gochi Israa’el kun Al-Aqsaa bakka lamatti muruudhaan Yahuudotaa kennuuf karoora Israa’el baafatte tahuu himan.
Masjiid Al-Aqsaa dabalatee iddoowwan amantaa Islaamaa fi Kiristiyaanaa magaala Al-Quds gama bahaa keessatti argaman hundi, too’annaa mootummaa Urduun jala kan jiran tahus, Israa’el seera addunyaa kana cabsuun naannicha too’annaa Yahuudotaa jala galchuudhaaf sochiiwwan bal’aa geggeessaa jirti.
Israa’el fulaa Baabul-Rahmaa yeroo jalqabatiif bara 2003 keessa yeroo muraasaaf kan cufte yoo tahu, bara 2017 keessas cufuuf yaaltee turte.